ဘယ်မော်ဒယ်ကို ရွေးချယ်မှာလဲ … ? Volkswagen Polo Vs Hyundai i20 Vs Mazda2- Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > Review > Comparison > ဘယ်မော်ဒယ်ကို ရွေးချယ်မှာလဲ … ? Volkswagen Polo Vs Hyundai i20 Vs Mazda 2
ဒီတခါတော့ လူကွိုကျမြား တနျဖိုးနညျး မျောဒယျတှထှေကျ နညျးနညျးပိုပွီး စြေးလညျး မွငျ့မယျ့ ဇိမျခံ အဖွဈရော အိမျစီး အဖွဈပါ အကောငျးဆုံး အသုံးဝငျနတေဲ့ Superminiတှေ အကွောငျး ပွောခငျြပါတယျ။ ဒီထဲမှာ Mazda 2ပါလာတာကတော့ ပွညျတှငျးက Mazda 2ကို Demioအဖွဈပါ လူသိမြားထားတဲ့ သူတှကေ သိပျကွိုကျခငျြမှာ မဟုတျပမေယျ့ မျောဒယျကို နောကျပိုငျး အဆငျ့မွှငျ့ပွီး အကောငျးဆုံး ထုတျလုပျလာမှုတှကေ အခု ၂၀၁၇ခုနှဈ အတှကျ အကောငျးဆုံး Superminiစာရငျးမှာတောငျ ပါရှိလာတာကွောငျ့ တနျးမွငျ့ Poloလို မျောဒယျတှနေဲ့ အတူတူ ထားပွီး ဘယျမျောဒယျက အကောငျးဆုံး ဖွဈမလဲ ဆိုတာ ယှဉျကွညျ့ခငျြလာခဲ့တာပါ။ ကောငျးပါပွီ၊ ဆကျကွညျ့ရအောငျပါ။
Polo – ဒီဇိုငျး လှပကောငျးမှနျတယျ၊ အရညျအသှေးမွငျ့တယျ၊ အငျဂငျြပိုငျး စှမျးဆောငျရညျမွငျ့တယျ
i20 – ရုပျထှကျ ဆှဲဆောငျမှု ကောငျးမှနျတယျ၊ စြေးခြိုတယျ၊ ဆီစားနှုနျး ခြိုသာတယျ
2 – ကိုယျထညျပိုငျး အရညျအသှေးကောငျးမှနျလာတယျ၊ အငျဂငျြပိုငျး စှမျးဆောငျရညျကောငျးတယျ၊ အပိုပစ်စညျးလှယျတယျ
Polo – အပိုပစ်စညျး နညျးနညျး စြေးမွငျ့ခငျြတယျ၊ ဆီစားနှုနျး အသငျ့ပဲ ရှိတယျ၊ စြေးမွငျ့တယျ
i20 – ကိုယျထညျပိုငျး အားနညျးခငျြတယျ၊ ဆေးသားပိုငျး အားနညျးခငျြတယျ၊ အပိုပစ်စညျး ရှားခငျြတယျ
2 – မျောဒယျမွငျ့တှမှော စြေးနှုနျးမွငျ့ခငျြတယျ၊ ဆကျစပျပစ်စညျးစြေးမွငျ့တယျ၊ လမျးကွမျးပိုငျး အားနညျးခငျြတယျ
မျောဒယျ ၃ခုဟာ နိုငျငံ တနိုငျငံစီမှာ အခွစေိုကျ ထားတဲ့ ကုမဏီတှကေနေ ထုတျလုပျလာခွငျးပါ။ သကျတမျးတှအေရရော ထုတျလုပျလာမှု အရညျအသှေးပိုငျးတှေ အရရော ကွညျ့မယျဆိုရငျ လကျရှိ ကမ်ဘာ့ မျောတျောကား အစီးရေ အမြားဆုံး ရောငျးခနြိုငျသူ နရောကို Toyotaဆီကနေ လကျလှဲရယူထားနိုငျတဲ့ VWရဲ့ မျောဒယျက အားအကောငျးဆုံးပါ။ ရုပျထှကျ တညျငွိမျတယျ၊ မာကြောတယျ၊ ဇိမျခံ အဖွဈတောငျ သုံးနိုငျလောကငျအောငျ အတှငျးခနျး သသေပျတယျ၊ ကောငျးမှနျတယျ၊ စိတျခရြပါတယျ။ Hyundaiရဲ့ မျောဒယျက အခု နောကျပိုငျး စြေးကှကျမှာ အောငျမွငျမှု ရအောငျ ဖနျတီး ကွိုးစားနတော တှရေ့ပမေယျ့ ဒီမျောဒယျနဲ့ ပတျသတျပွီး နှဈကာလ ရှညျကွာအောငျ စိတျကွိုကျဖွဈထားမှု မရှိသေးသလို ကိုရီးယားကား အမြားစုမှာ ကိုယျထညျပိုငျး နညျးနညျး ပြော့ခငျြတယျလို့ မွငျမိတာကွောငျ့ 2လောကျတောငျ စိတျကွိုကျ မဖွဈမိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဆှဲဆောငျမှုကတော့ i20က တျောတျောလေးကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ ဆှဲဆောငျမှုထကျ အရညျအသှေးကို ပိုပွီး ကွညျ့နတေဲ့ အနအေထားမှာတော့ အခု ကိုယျထညျပိုငျးကို Poloကို ပထမ ပေးခငျြပွီး 2ကို ဒုတိယနဲ့ ၂၀၀၈ခုနှဈကမှ စတငျ ထုတျလုပျနတေဲ့ i20ကို တတိယပဲ ပေးခငျြမိပါတယျ။
၁၉၇၅ခုနှဈကတညျးက ထုတျလုပျလာခဲ့တဲ့ Poloက မြိုးဆကျပွောငျးလဲထုတျလုပျမှု ၅ကွိမျတောငျ ရှိထားပွီ၊ အခုနောကျဆုံးထုတျ မြိုးဆကျကို ၂၀၀၉ခုနှဈကနေ အခုနှဈအတှကျထိအောငျ ထုတျလုပျနတေယျ၊ အငျဂငျြပိုငျးမှာ ၁.၂လီတာသုံး အငျဂငျြကနေ ၁.၄လီတာသုံး၊ ၁.၆လီတာသုံး ပုံစံ ၈မြိုးထိအောငျ ခှဲခွား ထုတျလုပျထားလို့ ရှေးခယျြနိုငျစရာ အမြားအပွား ရနိုငျပါတယျ။ 2မျောဒယျကတော့ ၁၉၉၆ခုနှဈကနေ စတငျ ထုတျလုပျလာခဲ့တယျ။ မြိုးဆကျ ၄ဆကျပွောငျးလဲ ထုတျလုပျထားပွီး အခု နောကျဆုံး ထုတျလုပျနတေဲ့ စတုတ်ထမွောကျ မြိုးဆကျက ၂၀၁၄ခုနှဈကနေ စတငျ ထုတျလုပျနတောပါ။ SkyActivနညျးပညာ အားကိုးနဲ့ Mazdaက မျောဒယျကို အငျဂငျြစနဈမှာ ၁.၃လီတာသုံးနဲ့ ၁.၅လီတာသုံး ပုံစံ ၃မြိုးပဲ ရှေးခယျြနျိုငျအောငျ ထုတျလုပျတာတှရေ့ပါတယျ။ ဆီစားနှုနျး ခြိုသာလာသလို စှမျးအငျထုတျလုပျမှုလညျး ကောငျးလာပမေယျ့ ရှေးခယျြနျိုငျစရာတော့ နညျးနပေါသေးတယျ။ i20ကတော့ Getzမျောဒယျရဲ့ နရောကို အစားထိုး ထုတျလုပျလာခွငျး ဖွဈပွီး သကျတမျးနု အနအေထားမှာ မျောဒယျက ၂၀၀၈ကနေ အခုခြိနျထိအောငျ မြိုးဆကျ ၂ဆကျပဲ ပွောငျးလဲ ထုတျလုပျထားပါသေးတယျ။ ဒုတိယ မြိုးဆကျကို ၂၀၁၄ခုနှဈကနေ စတငျ ထှကျရှိလာပွီး အငျဂငျြစနဈမှာ အသေးစား ၁.၀လီတာသုံး အငျဂငျြကနေ ၁.၁လီတာသုံး၊ ၁.၂လီတာသုံး၊ ၁.၂၅လီတာသုံးနဲ့ ၁.၄လီတာသုံးတှေ အဖွဈ ပုံစံ ၅မြိုး ရနိုငျတာ တှရေ့ပါတယျ။ မွို့တှငျးသုံး မျောဒယျ အနနေဲ့ အကောငျးဆုံး ရှေးခယျြနျိုငျစရာ ဖွဈလာပွီး ဒီအပိုငျးမှာလညျး စှမျးဆောငျရညျရော ရှေးခယျြနိုငျစရာပါ ကောငျးမှနျမြားပွားတဲ့ Poloကိုပဲ ပထမ ပေးရမှာပါ။ 2ကိုတော့ နညျးပညာပိုငျး သဘောကပြမေယျ့ ရှေးခယျြနိုငျစရာနညျးလို့ တတိယပဲ ပေးခငျြပွီး i20ကို အခု အပိုငျးမှာ ဒုတိယ ထားခငျြမိပါတယျ။
ပွညျတှငျး စြေးကှကျမှာ အမြားဆုံး ၀ငျရောကျနတေဲ့ Usedကားတှကေတော့ ဂပြနျကားတှပေါ။ ဆိုလိုရငျးကတော့ 2လို မျောဒယျတှပေါ။ မျောဒယျနိမျ့ကနေ မျောဒယျမွငျ့ထိအောငျ စိတျကွိုကျ ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ စြေးနှုနျး အစုံ၊ ကီလို အစုံ၊ အနအေထား အစုံနဲ့ ရနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မျောဒယျမွငျ့ 2ကတော့ အဝငျ နညျးပါသေးတယျ။ စြေးနှုနျးတော့ ခြိုပါတယျ။ Poloကတော့ ၂၀၁၀ခုနှဈ ၀နျးကငျြထုတျ မျောဒယျတှေ အဝငျမြားပါတယျ။ မျောဒယျခှဲ ရှေးခယျြနိုငျစရာ 2လောကျ မြားမြားစားစား မဝငျပမေယျ့ စြေးကှကျ တဈခု ကောငျးကောငျး ရှိနပေါတယျ။ စြေးနှုနျးတော့ မွငျ့ပါတယျ။ ပွညျတှငျးမှာ VWအရောငျးပွခနျး မရှိသေးပမေယျ့ VWအစီးမြားလို့ အပို ပစ်စညျး အရမျးတော့ မရှားပါဘူး။ i20ကတော့ Usedအနနေဲ့ ၀ငျရောကျမှု တျောတျောလေး နညျးပါတယျ။ ကိုရီးယားကားတှေ လှနျခဲ့တဲ့ ၃နှဈလောကျက လူကွိုကျမြားခဲ့ပမေယျ့ အခုတော့ ကိုရီးယား Usedကားကို စြေးကှကျက သိပျမကွိုကျကွပွနျပါဘူး။ i20ကိုလညျး အသဈ အနနေဲ့ပဲ ရနိုငျမှု မြားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒီ့အတှကျ အသဈ ဒါမှမဟုတျ မျောဒယျမွငျ့ အနအေထားမှာ i20တှကေ စြေးမွငျ့နပေါတယျ။ ရှေးခယျြနိုငျမှု အားကောငျးတဲ့ 2ကို အခု အပိုငျးမှာ ပထမ ပေးရမှာ ဖွဈပွီး Poloကို ဒုတိယနဲ့ i20ကို တတိယပဲ ပေးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
နရောရသလောကျတော့ အတတျနျိုငျဆုံး အရေးကွီးတဲ့ အပိုငျးတှကေို ပွောလာခဲ့ပါပွီနျော။ ဒီအနအေထားထိအောငျတော့ အပိုငျး တဈခုခငျြးစီမှာ ပထမ အမြားဆုံး ရထားတဲ့ Poloက အကောငျးဆုံး မျောဒယျ ဆိုတာ သတျမှတျဖို့ ဖွဈလာနပွေီး Usedကားစြေးကှကျတဈခုတညျးတငျ မဟုတျပဲ အသဈ အနအေထား၊ မျောဒယျမွငျ့ကားတှကေိုပါ ခတျေကောငျးလာရငျတော့ i20က ရှေးခယျြဖို့ အကောငျးဆုံး မျောဒယျတဈခု အနနေဲ့ ပွိုငျဖကျ မျောဒယျတှကေို ကောငျးကောငျး ယှဉျနိုငျလာဖို့ ရှိပမေယျ့ အခုတော့ ဂပြနျမျောဒယျ 2ကိုတောငျ ကြျောတကျဖို့ မလှယျခငျြတာကွောငျ့ ဒုတိယ နရောကို 2ကို ပေးခငျြပွီး သကျတမျးနု i20ကျိုတော့ မျောဒယျကောငျး ဆိုတာ မငွငျးနိုငျပမေယျ့ စြေးကှကျ အနအေထားကွောငျ့ တတိယ နရောပဲ ပေးခငျြပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စဉျးစားစရာ ရှိတာက သငျ့ အနနေဲ့ Usedကားကို ရှေးခယျြမှာလား၊ အသဈအနအေထားကို လိုခငျြတာပါလား။
ပွညျတှငျး အနအေထားအတှကျကတော့ သငျ့ အနနေဲ့ အသဈကိုပဲ လိုခငျြတယျ ဆိုရငျ VWရဲ့ မျောဒယျကို ရနိုငျဖို့ နညျးနညျး ခကျခငျြပါတယျ။ 2နဲ့ i20ကတော့ အသငျ့ ရနိုငျနမှောပါ။ ပွီးတော့ 2က အငျဂငျြနညျးပညာ ကောငျးတယျ၊ သဘာကစြရာ ဖွဈပမေယျ့ i20ဆိုတာကလညျး အာမခံ အပိုငျးမှာ တခွား မျောဒယျတှထေကျ အာမခံ နှဈ ကောငျးကောငျးပေးထားတဲ့ မျောဒယျပါ။ အသဈ အနအေထား လိုခငျြသူတှေ အတှကျဆိုရငျတော့ မွို့တှငျးသုံး အတှကျ i20ဟာ အကောငျးဆုံး ဖွဈမယျလို့ ဆိုခငျြပွီး လမျးစုံသုံးမယျ့သူတှေ အတှကျ 2ကို အားပေးခငျြပါတယျ။
Usedတှပေဲ လိုခငျြတယျ၊ လလေ့ာနသေူတှေ အတှကျကတော့ Poloဟာ အရညျအသှေးကောငျး ကားတဈစီး အနနေဲ့ စြေးကှကျထဲမှာ ရနိုငျနတေဲ့ မျောဒယျကောငျးပါ။ 2ကို မျောဒယျမွငျ့ အနအေထား ရှာမယျ ဆိုရငျလညျး Poloလောကျ စြေးနှုနျးသှားကတြာပါပဲ။ တဈခု ရှိတာက Poloက ဇိမျခံ အနလေောကျနဲ့ အထိအောငျပါ သုံးနိုငျလောကျအောငျ စိတျခရြမှုနဲ့ ရရှေညျ အတှကျလညျး ကောငျးနိုငျတာကွောငျ့ သူ့ကို အခု မျောဒယျတှထေဲမှာ ရှေးခယျြဖို့ အကောငျးဆုံး မျောဒယျ အဖွဈ သတျမှတျခငျြပွီး ကနျြ 2နဲ့ i20ကိုတော့ မွို့တှငျးသုံးနဲ့ လမျးစုံသုံး၊ မိမိရဲ့ အသုံးလိုမှု အပျေါမှာ ရှေးခယျြဝယျယူတာ အကောငျးဆုံး ဖွဈမယျလို့ ဆိုခငျြပါတယျ။
ဒီတခါတော့ လူကြိုက်များ တန်ဖိုးနည်း မော်ဒယ်တွေထွက် နည်းနည်းပိုပြီး ဈေးလည်း မြင့်မယ့် ဇိမ်ခံ အဖြစ်ရော အိမ်စီး အဖြစ်ပါ အကောင်းဆုံး အသုံးဝင်နေတဲ့ Superminiတွေ အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ Mazda 2ပါလာတာကတော့ ပြည်တွင်းက Mazda 2ကို Demioအဖြစ်ပါ လူသိများထားတဲ့ သူတွေက သိပ်ကြိုက်ချင်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် မော်ဒယ်ကို နောက်ပိုင်း အဆင့်မြှင့်ပြီး အကောင်းဆုံး ထုတ်လုပ်လာမှုတွေက အခု ၂၀၁၇ခုနှစ် အတွက် အကောင်းဆုံး Superminiစာရင်းမှာတောင် ပါရှိလာတာကြောင့် တန်းမြင့် Poloလို မော်ဒယ်တွေနဲ့ အတူတူ ထားပြီး ဘယ်မော်ဒယ်က အကောင်းဆုံး ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ယှဉ်ကြည့်ချင်လာခဲ့တာပါ။ ကောင်းပါပြီ၊ ဆက်ကြည့်ရအောင်ပါ။
Polo – ဒီဇိုင်း လှပကောင်းမွန်တယ်၊ အရည်အသွေးမြင့်တယ်၊ အင်ဂျင်ပိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တယ်
i20 – ရုပ်ထွက် ဆွဲဆောင်မှု ကောင်းမွန်တယ်၊ ဈေးချိုတယ်၊ ဆီစားနှုန်း ချိုသာတယ်
2 – ကိုယ်ထည်ပိုင်း အရည်အသွေးကောင်းမွန်လာတယ်၊ အင်ဂျင်ပိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတယ်၊ အပိုပစ္စည်းလွယ်တယ်
Polo – အပိုပစ္စည်း နည်းနည်း ဈေးမြင့်ချင်တယ်၊ ဆီစားနှုန်း အသင့်ပဲ ရှိတယ်၊ ဈေးမြင့်တယ်
i20 – ကိုယ်ထည်ပိုင်း အားနည်းချင်တယ်၊ ဆေးသားပိုင်း အားနည်းချင်တယ်၊ အပိုပစ္စည်း ရှားချင်တယ်
2 – မော်ဒယ်မြင့်တွေမှာ ဈေးနှုန်းမြင့်ချင်တယ်၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းဈေးမြင့်တယ်၊ လမ်းကြမ်းပိုင်း အားနည်းချင်တယ်
မော်ဒယ် ၃ခုဟာ နိုင်ငံ တနိုင်ငံစီမှာ အခြေစိုက် ထားတဲ့ ကုမဏီတွေကနေ ထုတ်လုပ်လာခြင်းပါ။ သက်တမ်းတွေအရရော ထုတ်လုပ်လာမှု အရည်အသွေးပိုင်းတွေ အရရော ကြည့်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ မော်တော်ကား အစီးရေ အများဆုံး ရောင်းချနိုင်သူ နေရာကို Toyotaဆီကနေ လက်လွှဲရယူထားနိုင်တဲ့ VWရဲ့ မော်ဒယ်က အားအကောင်းဆုံးပါ။ ရုပ်ထွက် တည်ငြိမ်တယ်၊ မာကျောတယ်၊ ဇိမ်ခံ အဖြစ်တောင် သုံးနိုင်လောကင်အောင် အတွင်းခန်း သေသပ်တယ်၊ ကောင်းမွန်တယ်၊ စိတ်ချရပါတယ်။ Hyundaiရဲ့ မော်ဒယ်က အခု နောက်ပိုင်း ဈေးကွက်မှာ အောင်မြင်မှု ရအောင် ဖန်တီး ကြိုးစားနေတာ တွေ့ရပေမယ့် ဒီမော်ဒယ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နှစ်ကာလ ရှည်ကြာအောင် စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ထားမှု မရှိသေးသလို ကိုရီးယားကား အများစုမှာ ကိုယ်ထည်ပိုင်း နည်းနည်း ပျော့ချင်တယ်လို့ မြင်မိတာကြောင့် 2လောက်တောင် စိတ်ကြိုက် မဖြစ်မိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှုကတော့ i20က တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဆွဲဆောင်မှုထက် အရည်အသွေးကို ပိုပြီး ကြည့်နေတဲ့ အနေအထားမှာတော့ အခု ကိုယ်ထည်ပိုင်းကို Poloကို ပထမ ပေးချင်ပြီး 2ကို ဒုတိယနဲ့ ၂၀၀၈ခုနှစ်ကမှ စတင် ထုတ်လုပ်နေတဲ့ i20ကို တတိယပဲ ပေးချင်မိပါတယ်။
၁၉၇၅ခုနှစ်ကတည်းက ထုတ်လုပ်လာခဲ့တဲ့ Poloက မျိုးဆက်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်မှု ၅ကြိမ်တောင် ရှိထားပြီ၊ အခုနောက်ဆုံးထုတ် မျိုးဆက်ကို ၂၀၀၉ခုနှစ်ကနေ အခုနှစ်အတွက်ထိအောင် ထုတ်လုပ်နေတယ်၊ အင်ဂျင်ပိုင်းမှာ ၁.၂လီတာသုံး အင်ဂျင်ကနေ ၁.၄လီတာသုံး၊ ၁.၆လီတာသုံး ပုံစံ ၈မျိုးထိအောင် ခွဲခြား ထုတ်လုပ်ထားလို့ ရွေးချယ်နိုင်စရာ အများအပြား ရနိုင်ပါတယ်။ 2မော်ဒယ်ကတော့ ၁၉၉၆ခုနှစ်ကနေ စတင် ထုတ်လုပ်လာခဲ့တယ်။ မျိုးဆက် ၄ဆက်ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အခု နောက်ဆုံး ထုတ်လုပ်နေတဲ့ စတုတ္ထမြောက် မျိုးဆက်က ၂၀၁၄ခုနှစ်ကနေ စတင် ထုတ်လုပ်နေတာပါ။ SkyActivနည်းပညာ အားကိုးနဲ့ Mazdaက မော်ဒယ်ကို အင်ဂျင်စနစ်မှာ ၁.၃လီတာသုံးနဲ့ ၁.၅လီတာသုံး ပုံစံ ၃မျိုးပဲ ရွေးချယ်နိုင်အောင် ထုတ်လုပ်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဆီစားနှုန်း ချိုသာလာသလို စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုလည်း ကောင်းလာပေမယ့် ရွေးချယ်နိုင်စရာတော့ နည်းနေပါသေးတယ်။ i20ကတော့ Getzမော်ဒယ်ရဲ့ နေရာကို အစားထိုး ထုတ်လုပ်လာခြင်း ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းနု အနေအထားမှာ မော်ဒယ်က ၂၀၀၈ကနေ အခုချိန်ထိအောင် မျိုးဆက် ၂ဆက်ပဲ ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ်ထားပါသေးတယ်။ ဒုတိယ မျိုးဆက်ကို ၂၀၁၄ခုနှစ်ကနေ စတင် ထွက်ရှိလာပြီး အင်ဂျင်စနစ်မှာ အသေးစား ၁.၀လီတာသုံး အင်ဂျင်ကနေ ၁.၁လီတာသုံး၊ ၁.၂လီတာသုံး၊ ၁.၂၅လီတာသုံးနဲ့ ၁.၄လီတာသုံးတွေ အဖြစ် ပုံစံ ၅မျိုး ရနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ မြို့တွင်းသုံး မော်ဒယ် အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်နိုင်စရာ ဖြစ်လာပြီး ဒီအပိုင်းမှာလည်း စွမ်းဆောင်ရည်ရော ရွေးချယ်နိုင်စရာပါ ကောင်းမွန်များပြားတဲ့ Poloကိုပဲ ပထမ ပေးရမှာပါ။ 2ကိုတော့ နည်းပညာပိုင်း သဘောကျပေမယ့် ရွေးချယ်နိုင်စရာနည်းလို့ တတိယပဲ ပေးချင်ပြီး i20ကို အခု အပိုင်းမှာ ဒုတိယ ထားချင်မိပါတယ်။
ပြည်တွင်း ဈေးကွက်မှာ အများဆုံး ၀င်ရောက်နေတဲ့ Usedကားတွေကတော့ ဂျပန်ကားတွေပါ။ ဆိုလိုရင်းကတော့ 2လို မော်ဒယ်တွေပါ။ မော်ဒယ်နိမ့်ကနေ မော်ဒယ်မြင့်ထိအောင် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း အစုံ၊ ကီလို အစုံ၊ အနေအထား အစုံနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မော်ဒယ်မြင့် 2ကတော့ အ၀င် နည်းပါသေးတယ်။ ဈေးနှုန်းတော့ ချိုပါတယ်။ Poloကတော့ ၂၀၁၀ခုနှစ် ၀န်းကျင်ထုတ် မော်ဒယ်တွေ အ၀င်များပါတယ်။ မော်ဒယ်ခွဲ ရွေးချယ်နိုင်စရာ 2လောက် များများစားစား မ၀င်ပေမယ့် ဈေးကွက် တစ်ခု ကောင်းကောင်း ရှိနေပါတယ်။ ဈေးနှုန်းတော့ မြင့်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ VWအရောင်းပြခန်း မရှိသေးပေမယ့် VWအစီးများလို့ အပို ပစ္စည်း အရမ်းတော့ မရှားပါဘူး။ i20ကတော့ Usedအနေနဲ့ ၀င်ရောက်မှု တော်တော်လေး နည်းပါတယ်။ ကိုရီးယားကားတွေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်က လူကြိုက်များခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ကိုရီးယား Usedကားကို ဈေးကွက်က သိပ်မကြိုက်ကြပြန်ပါဘူး။ i20ကိုလည်း အသစ် အနေနဲ့ပဲ ရနိုင်မှု များတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ့အတွက် အသစ် ဒါမှမဟုတ် မော်ဒယ်မြင့် အနေအထားမှာ i20တွေက ဈေးမြင့်နေပါတယ်။ ရွေးချယ်နိုင်မှု အားကောင်းတဲ့ 2ကို အခု အပိုင်းမှာ ပထမ ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး Poloကို ဒုတိယနဲ့ i20ကို တတိယပဲ ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေရာရသလောက်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းတွေကို ပြောလာခဲ့ပါပြီနော်။ ဒီအနေအထားထိအောင်တော့ အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီမှာ ပထမ အများဆုံး ရထားတဲ့ Poloက အကောင်းဆုံး မော်ဒယ် ဆိုတာ သတ်မှတ်ဖို့ ဖြစ်လာနေပြီး Usedကားဈေးကွက်တစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ပဲ အသစ် အနေအထား၊ မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေကိုပါ ခေတ်ကောင်းလာရင်တော့ i20က ရွေးချယ်ဖို့ အကောင်းဆုံး မော်ဒယ်တစ်ခု အနေနဲ့ ပြိုင်ဖက် မော်ဒယ်တွေကို ကောင်းကောင်း ယှဉ်နိုင်လာဖို့ ရှိပေမယ့် အခုတော့ ဂျပန်မော်ဒယ် 2ကိုတောင် ကျော်တက်ဖို့ မလွယ်ချင်တာကြောင့် ဒုတိယ နေရာကို 2ကို ပေးချင်ပြီး သက်တမ်းနု i20ကိ်ုတော့ မော်ဒယ်ကောင်း ဆိုတာ မငြင်းနိုင်ပေမယ့် ဈေးကွက် အနေအထားကြောင့် တတိယ နေရာပဲ ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စဉ်းစားစရာ ရှိတာက သင့် အနေနဲ့ Usedကားကို ရွေးချယ်မှာလား၊ အသစ်အနေအထားကို လိုချင်တာပါလား။
ပြည်တွင်း အနေအထားအတွက်ကတော့ သင့် အနေနဲ့ အသစ်ကိုပဲ လိုချင်တယ် ဆိုရင် VWရဲ့ မော်ဒယ်ကို ရနိုင်ဖို့ နည်းနည်း ခက်ချင်ပါတယ်။ 2နဲ့ i20ကတော့ အသင့် ရနိုင်နေမှာပါ။ ပြီးတော့ 2က အင်ဂျင်နည်းပညာ ကောင်းတယ်၊ သဘာကျစရာ ဖြစ်ပေမယ့် i20ဆိုတာကလည်း အာမခံ အပိုင်းမှာ တခြား မော်ဒယ်တွေထက် အာမခံ နှစ် ကောင်းကောင်းပေးထားတဲ့ မော်ဒယ်ပါ။ အသစ် အနေအထား လိုချင်သူတွေ အတွက်ဆိုရင်တော့ မြို့တွင်းသုံး အတွက် i20ဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုချင်ပြီး လမ်းစုံသုံးမယ့်သူတွေ အတွက် 2ကို အားပေးချင်ပါတယ်။
Usedတွေပဲ လိုချင်တယ်၊ လေ့လာနေသူတွေ အတွက်ကတော့ Poloဟာ အရည်အသွေးကောင်း ကားတစ်စီး အနေနဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ ရနိုင်နေတဲ့ မော်ဒယ်ကောင်းပါ။ 2ကို မော်ဒယ်မြင့် အနေအထား ရှာမယ် ဆိုရင်လည်း Poloလောက် ဈေးနှုန်းသွားကျတာပါပဲ။ တစ်ခု ရှိတာက Poloက ဇိမ်ခံ အနေလောက်နဲ့ အထိအောင်ပါ သုံးနိုင်လောက်အောင် စိတ်ချရမှုနဲ့ ရေရှည် အတွက်လည်း ကောင်းနိုင်တာကြောင့် သူ့ကို အခု မော်ဒယ်တွေထဲမှာ ရွေးချယ်ဖို့ အကောင်းဆုံး မော်ဒယ် အဖြစ် သတ်မှတ်ချင်ပြီး ကျန် 2နဲ့ i20ကိုတော့ မြို့တွင်းသုံးနဲ့ လမ်းစုံသုံး၊ မိမိရဲ့ အသုံးလိုမှု အပေါ်မှာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
Tags Car ReviewcomparisonHyundai
“ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု နှင့် မောင်းနှင်ခြင်း”